Book Myanmar Hotel Reward Points FAQ and T&Cs's detail | Hotels in Myanmar | Book Myanmar Hotels
Book Myanmar Hotel Reward Points ရယူနိုင်သောနည်းလမ်းများနှင့် အသုံးပြုပုံ
Point တွေကို ငွေသားဖြင့် လဲလှယ်လို့ မလား ?
Point တွေကိုငွေသားဖြင့် လဲလှယ်လို့ မရပါဘူး။ လူကြီးမင်းရရှိထားသော Point နှင့် လှဲလှယ်နိုင်သည့် Reward Gifts များကို ဒီ Reward Gift များ မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ငွေပေးချေသည့်အချိန်တွင် Rewards Point ကိုတောင်းရန်မေ့သွားလျှင် ၎င်းငွေပေးချေမှုအတွက် နောက်မှ Rewards Point ပြန်တောင်လို့ရနိုင်ပါသလား?
အဲ့ အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ Book Myanmar Hotel Booking Service ကနေ Booking တင်သွားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တိုင်းကို Book Myanmar Hotel Booking Service ရဲ့ System မှ Reward Points များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီ ထည့်သွင်းပေးသွားပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘာလို့ Gift တွေကို လဲလို့မရတာလဲ ?
ကျေးဇူးပြုပြီး လူကြီးမင်းရရှိထားသော Point ၏ သက်တမ်းနှင့် Gift ၏ Point အရေအတွက်များကို စစ်ဆေးကြည့်ပေးပါ။Point သက်တမ်းရှိပြီး လဲလှယ်လို့မရပါက Book Myanmar Hotel Booking ၏ Customer Service ဖုန်းနံပါတ် 09969910122 သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။
Book Myanmar Hotel Booking Service မှ ဝယ်ယူသော Flight နှင့် Express Ticket တွေအတွက်ရော Reward Points တွေ ရရှိနိုင်ပါသလား ?
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ Hotel Booking များအတွက်သာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Book Myanmar Hotel Booking Service မှ ဝယ်ယူသော Flight နှင့် Express Ticket တွေအတွက် Reward Points များ မရရှိနိုင်ပါ။
Rewards Point တွေရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်ရှိလဲ ?
Book Myanmar Hotel Booking Service မှပေးသော Rewards Points တွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် 1 Year သက်တမ်းရှိပါတယ်။
အခြားသူတွေရဲ့ Points တွေနှင့် ပေါင်းစပ် အသုံးပြုလို့ရပါသလား?
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ Book Myanmar Hotel Booking Service မှ ပေးသော Point တွေဟာ တခြားသူသို့လွှဲပြောင်းပေး၍မရသလို တခြားသူ၏ Point များဖြင့်လည်းပေါင်းစပ် အသုံးပြု၍မရနိုင်ပါ။
1 Point ရဖို့ Book Myanmar Hotel Booking Service ကနေ ဘယ်လောက်ဖိုးသုံးရမှာလဲ?
Book Myanmar Hotel Booking Service မှ Rewards Point အဖြင့် ၁၀၀ ကျပ်ဖိုးကို 1 Point နှုန်းဖြင့် Reward Points များပြန်ပေးပါတယ်။
Point တွေကြည့်ရာမှာ အကူအညီလိုအပ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ Book Myanmar Hotel Booking Service ကနေ Hotel Booking နှင့် Flight Ticket တွေဝယ်ယူ ပြီး Point တွေစုချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မေးလိုရာမေးချင်တယ်ဆိုရင် နေ့စဉ် ပိတ်ရက်မရှိ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း
📳09895711223 (Hot Line) တို့ကိုသာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ……
ရုံးချိန်ပြင်ပ ဆိုရင်လည်း Hot Line နံပါတ်ကိုဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်....
Book Myanmar Hotel Customer Service က သင့်ကို ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေမှာပါ။
Aug 19, 2020 03:38
Aug 28, 2020 02:47